Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay Waxyaabaha Maanka dooriya & dad isticmaalayay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay Waxyaabaha Maanka dooriya & dad isticmaalayay
Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay Waxyaabaha Maanka dooriya & dad isticmaalayay
written by warsan radio 22/02/2022
Howlgal uu hoggaaminayo Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud lagana sameeyay Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ayaa lagu soo qabqabtay Mandoriyaal iyo dadkii isticmalayay.
Howlgalkan oo qaatay lux Saacadood ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyeyaasha saldhigyada Garoowe, Saraakiisha C.I.D-da, waxaana u jeedku ahaa la dagaalanka dadka falalka Amni darro geysta iyo waxyaabaha maanka Mandooriya.
Ciidamada booliska oo xog ka helaya hayadaha sirdoonka Puntland ayaa howl galkan ka sameeyay qaar ka mida xaafadaha Garoowe, iyaga oo Guryaha iyo Gadiidka lagu baarayay si dadka ku dhuumaaley sanayaa magalada loo soo afjaro waxaa sidoo kale lagu baadi goobayay Mandooriyaasha noocyadooda kala duwan.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal G/sare Xusseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwo joogta ah si fursad aysan u helinba kooxaha fallaka Amni darro geystw iyo kuwa dhalinyarada haleynaya Ciidamaduna ay diyaar u yihiin in bulshada wax walbo dhibaya ay ka qabtaan.
Taliyaha qaybta ayaa xusay in dadka howlgalka lagu soo qabtay mandooriyaha khamriga iyo xashiishka iskugu jirtay inay sharciga horgayn doonaan iyaga iyo gadiidkii lagu soo qabtay.
Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay Waxyaabaha Maanka dooriya & dad isticmaalayay was last modified: February 22nd, 2022 by warsan radio
Saciid Deni Oo Maanta Qaatay Shahaadada Musharaxnimo Ee Xilka Madaxweynaha Dalka
Maamulka Koonfur Galbeed oo Hay’adaha UN-ka kala hadlay u gurmashada..
Koonfur Galbeed oo magacaawday Guddoomiye ku-xigeeno Cusub (Wareegto)
Dahgeyso:-Warka Galab ee Idaacada Warsan
Dowlada Somalia oo faahfaahisay duqeyn lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab